Wisycom ၏ Custom RF Solution သည်ဒီမိုကရက်တစ်အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုများအတွက် CNN လွှမ်းခြုံမှုအတွက် Big Winner ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Wisycom ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ RF ဖြေရှင်းချက်ဒီမိုကရက်တစ် Debate ၏ CNN ကလွှမ်းခြုံဘို့နဲ့ Big Winner ကြေငြာခြင်း
Wisycom ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ RF ဖြေရှင်းချက်ဒီမိုကရက်တစ် Debate ၏ CNN ကလွှမ်းခြုံဘို့နဲ့ Big Winner ကြေငြာခြင်း
Las Vegas, ဖေဖော်ဝါရီ 29, 2016 - ထို 2016 ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း Las Vegas မှာအဆိုပါ Wynn ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ပယ်နှစ်ထပ်အခါ, ဂယ်ရီ Vahling, အသံလက်ရာ, Inc ၏ပိုင်ရှင် / သမ္မတနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတစ်ဦးကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပေးတာဝန်ပေးထားတဲ့ CNN ကန့်ပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများသည်။ Vahling အလုပ်အမှုကိုပြုရ, ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးခေတ်မီ RF ဖြေရှင်းချက်၏ Wisycom, ဒီဇိုင်နာနှင့်ဆောက်လှည့်။
Vahling ပထမဦးဆုံး 2010 အတွက် NAB မှာ Wisycom မှမိတ်ဆက်နှင့် 2011 ၌သူ၏ပထမဦးဆုံးသရုပ်ပြအပိုင်းအစတယ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ 2014 အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သောအခါသူတစ်ဦးအပြည့်အဝအချိန်အသုံးပြုသူနှင့်ခွင့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Vahling ပေး Wisycom ဂီယာစင်မြင့်များနှင့်ထရပ်ကားများအကြားလုပ်ငန်းအသွားအလာလွှမ်းခြုံတိုးတက်လာဖို့က CNN ဇာတ်စင်မန်နေဂျာနဲ့ audio ယာဉ်အမှုထမ်းများကအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါရုပ်မြင်သံကြားကနေဆွေးနွေးငြင်းခုံမဆိုပြဿနာများမရှိဘဲပိတ်ထားသည် သွား. သေချာစေရန်အလို့ငှာ, Vahling ပထမဦးဆုံးအခန်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အလားအလာတွေကို RF-related ကိစ္စရပ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ site တစ်ခုစစ်တမ်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းစကင်ကိုပြုလေ၏။ "ငါသည်ကြီးမားသောကွင်းမြင်ဘူးပြီးတာနဲ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောနယ်ပယ်များအတွက်ပြည့်စုံလွှမ်းခြုံခဲ့သေချာအောင်နိုင်ရန်အတွက် Wisycom ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုနိုင်မှအသိ လုပ်. ," Vahling ကပြောပါတယ်။ "ဟုတ်ပါတယ်စံကြိုးမဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့် PL စနစ်များကိုအင်တင်နာများထဲမှတစ်ခု pair တစုံ၏အသုံးပြုမှု, ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခု MICS နှင့်တဦးတည်းထုတ်လွှင့်အဘို့အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့် PL ဘို့ခံယူခွင့်ပြုပါ။ ဒါဟာသင်လုံးဝအဓိကဧရိယာပေါ်ရုံတစျခုလွှမ်းခြုံဇုန်သို့သော့ခတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Wisycom ဂီယာမှ built-in နည်းပညာ၏, ကျနော်တို့အဓိကအခန်းပြည့်စုံလွှမ်းခြုံရှိသည်ဖို့နိုငျခဲ့ကွတပေါင်းလွှမ်းခြုံဇုန် (စသည်တို့ကိုအခန်းထဲစင်္ကြံ, ထရပ်ကားဧရိယာဆေးထည့်) ။ အားလုံးဇုန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50,000 စတုရန်းပေဖုံးအုပ်နေတဲ့သုညအရှုံး system ကိုဖန်တီးရန် Wisycom RF filter ကို / အသံချဲ့စက်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခံယူ! ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုကြောင်း MAT 288 programmer RF ပေါင်းစပ်ကျွန်တော်တို့ကိုခလုတ့်တွန်းအားပေးနှင့်အတူလက်ခံရရှိဇုန်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ "
Vahling တဦးတည်း MAT 288 အပါအဝင် Wisycom ဂီယာတစ်ခုခင်းကျင်းသုံးလေး MFL fiberboxes (နှစ်ခု TTRR နှစ်ယောက် RRTT), နှစ်ခုဘော Wideband အင်တင်နာ Boosters, ခြောက်လ BAA Wideband အင်တင်နာ Boosters, LNN1 Wideband လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အင်တာနာ, AGN-00 Omnidirectional antenna အဖြစ် CSA-414 RF Splitter / ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် SPL-218AW Active ကို Wideband အင်တင်နာ Splitters ။
"ထို့အပြင် MFL Fiberbox BX1-4U ကြောင့်အဓိကဧရိယာနှင့်ထရပ်ကားများအကြားရှည်လျားအကွာအဝေး၏ကိုထရပ်ကားဇုန်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြု," Vahling ကထပ်ပြောသည်။ "ဟုအဆိုပါ MFL fiberboxes အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ဇာတ်စင်မန်နေဂျာနှင့်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးအသုံးပြုသူများကိုအတားအဆီးမရှိဘဲထရပ်ကားသွားပြီးသူတို့ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားကြသောအခါတစ်ဦးချောမွေ့စွာလုပ်ငန်းအသွားအလာဧရိယာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောဖိုင်ဘာကျော်အားလုံး RF အချက်ပြမှုများကို run နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အဆိုပါ MAT 288 ကြိုးမဲ့ MICS နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်လိုမျိုးတော့ကြီးနှင့် MFL အပေါငျးတို့သဇာတ်စင်မန်နေဂျာနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဒီ Wisycom ထုတ်ကုန်လိုင်းအဘယ်သူမျှမကအခြားထုတ်လုပ်သူထောက်ပံ့နိုင်သလဲဆိုတာကိုကမ်းလှမ်း," Vahling နေဆဲဖြစ်သည်။ "ဟုအဆိုပါနည်းပညာ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏လွယ်ကူသူတို့ရှေ့မှာပြုမိခဲ့ဘယ်တော့မှမယ့်ဘာလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း RF ဖြန့်ဖြူးထုတ်ကုန်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးပါသည်။ တွေကို RF လွှမ်းခြုံ၏ဤချဲ့ထွင်ရှိသည်နိုင်စေရန်အတော်လေးရိုးရှင်းစွာဂိမ်း changer ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအသံလွှင့် Wisycom မှကျေးဇူးတင်ပါသည်တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ "
Wisycom သူတို့ရဲ့သက်တမ်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရ, လက်တွေ့ကျပြီးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစျေးနှုန်းမှတ်ကျော်ကြားတဲ့ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးခေတ်မီ RF ဖြေရှင်းချက်၏ဒီဇိုင်နာနှင့်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Wisycom ရဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ရွေးချယ်ရေးထံမှကုမ္ပဏီ၏အီတလီစက်ရုံများမှာရာအရပ်ကိုကြာသောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖို့, ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အဆုံးစွန်အရည်အသွေး, အသေးစိတ်အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတိုင်းဖောက်သည်တစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ်အမှုဆောင်အပေါ်သူ့ဟာသူ prides ။ ထုံးစံဒီဇိုင်း မှစ. စနစ်များအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် Dimension ငှါ, Wisycom အဖွဲ့ကဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းတဆင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များကကိုဆိုလိုတာပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.wisycom.com.
တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်, အသံလက်ရာအသံလွှင့်, တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ, ရုပ်ရှင် / ရုပ်မြင်သံကြားစက်-Video, ကော်ပိုရိတ် AV စနစ်နှင့်ပေါင်းစည်းရေးန်ဆောင်မှုများအဘို့အရောင်းနှင့်အငှားလုပ်ငန်းအထူးပြု Wisycom ကြိုးမဲ့နည်းပညာများအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအမေရိကန်ဖြန့်ချိသည်။ တဦးတည်းဖောက်သည်အာရုံနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအပေါ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအောင်မြင်မှုအာမခံထား။ 20 နှစ်ပေါင်းအတိုင်ပင်ခံအတွေ့အကြုံကိုထက်ပိုမိုနဲ့အတူကျမတို့ကလည်းဘယ် application များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအသံပစ္စည်းကိရိယာများဒီဇိုင်းနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်ပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.audiomasterpiece.com
Studio Technologies '' Model 207 သည် eSports ကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည် - ဇွန်လ 4, 2020
Pliant Technologies က Wireless Intercom Trade-In Promotion ကိုကြေငြာခဲ့သည် - ဇွန်လ 3, 2020
Erik“ Blu2th” Griggs သည် KRK Systems နှင့်သူ၏အရောအနှောများကိုအနက်ရောင်ကြားရသည် - ဇွန်လ 2, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် wisycom 2016-02-29
ယခင်: မကြာမီတီဗီ Spectrum Repack များအတွက် Dielectric အားကောင်းလာစေရန် VHF Portfolio